Olona roa arahin’ny fitsarana maso…: Ramatoa iray mpanao diplaoma hosoka naiditra am-ponja | NewsMada
Olona roa arahin’ny fitsarana maso…: Ramatoa iray mpanao diplaoma hosoka naiditra am-ponja
Par Taratra sur 12/09/2020
Niaiky teo anatrehan’ny mpanao famotorana ity ramatoa ity fa efa maro ny diplaoma hosoka namboariny sy efa ampiasain’ireo nividy azy. Naiditra am-ponja vonjimaika, omaly, ity ramatoa ity, taorian’ny nakan’ny mpitsara mpanao famotorana am-bavany azy. Olona roa hafa kosa no harahin’ny Fitsarana maso akaiky.
Nisy talen-tsekoly ami­na oniversite tsy miankina amin’ny fanjakana iray no tonga nametraka fi­toriana tao amin’ny foiben’ny fikarohana fandikan-dalàna eo anivon’ny fibaikoana ny zandarimariam-pirenena, ny fa­ran’ny volana aogositra lasa teo.
Antony, noho ny fisian’ny vehivavy iray manamboatra sy mivarotra diplaoma hosoka amin’ny anaran’ity oniversite tsy miankina ity ary tsy vi­tan’izay fa mangalatra ny so­nian’ny tale ao amin’ny sekoly mihitsy izy, araka ny fampitam-baovao voaray teo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Niroso tamin’ny fikarohana sy ny fanadihadiana ny zandary ka voasambotra ilay tompon’antoka tamin’izany. Niai­ky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny zandary ka tamin’izany no nilazany fa efa maro ny diplaoma namboariny ary ampiasain’ireo olona nividy izany. Nahavariana tamin’ity raharaha ity, vitany koa ny nanova ny lisitr’ireo mpianatra navoakan’ity oniversite tsy miankina ity teny amin’ny sampandraharaha misahana ny fitoviana lenta eo anivon’ ny minisiteran’ny Asam-panjakana. Nohamafisin’ny zandary fa ahina ho efa nisy nampiasaina nanaovana “reclassement” aza ireo diplaoma hosoka vitan’ity mpisoloky ity.
Nametraka fitoriana momba azy koa ny Primatiora
Natolotra ny fampanoavana izy ka naiditra am-ponja vonjimaika. Olona roa hafa kosa no arahin’ny fitsarana maso akaiky momba ity raharaha ity. Mitohy kosa ny fikarohana ireo mpiray tsikombakomba aminy miaraka amin’ ireo olona efa nampanao ireo diplaoma hosoka ireo. Mari­hina fa misy fitoriana momba ity mpisoloky ity koa napetraky ny teo anivon’ny Prima­ti­ora ary efa misokatra ny fanadihadiana momba izany. Ma­naitra ny besinimaro ny eo anivon’ny zandarimariam-pi­re­nena mba tsy hiditra amin’ ny fanjifana ireny diplaoma hosoka ireny sy hitoroka avy hatrany raha maheno izany. Manimba ny fiarahamonina sy ny tontolon’ny asa izany. Fampidirana am-ponja no sazy miandry ireo tratra ma­nao sy/na mampiasa ireny dip­laoma hosoka ireny.
Aoka ho mailo, araka izany, amin’ ireny olona milaza fa mahita sy/na mahavita mikarakara diplaoma na koa fifaninanana karakarain’ny fanjakana ireny.